पाथिभरा माताले सबैको रक्षा गरुन ! आज २०७७ भदौ ८ गते सोमबार, तपाइँको राशिफल कस्तो छ ? जानी राखौ
मेष : पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ मिल्ने योग छ । प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । दिन उत्साहपूर्ण रहनेछ । पढाइको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ र लेखन कलामा निखारता आउनेछ। अध्ययनका लागि भ्रमणको मौका जुट्न सक्छ । व्यापारमा सामान्य फाइदा भए पनि पशुपालन र कृषि क्षेत्रबाट
सोमबार यी ७ काम गरे हुन्छ दु:ख हरण ! जानी राखौ
भोलि गणेश चतुर्थी, भगवान् गणेशको पूजा आराधना गरी मनाइँदै !
प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्थीका दिन अग्रपूजाको अधिकार प्राप्त गर्नुभएका विघ्नहर्ता भगवान् गणेशको पूजा आराधना गरी मनाइने गणेश चतुर्थी पर्व भोलि मनाइँदै छ । सत्ययुगमा भाद्र शुक्ल चतुर्थीका दिन भगवान् गणेशको जन्म भएको शास्त्रीय मान्यता छ । यस अवसरमा भोलि उपत्यकाका अशोकविनायक, चन्द्रविनायक, सूर्यविनायक, कमलविनायक, कमलादीलगायत देशभरका गणेश मन्दिरमा विशेष
शुक्रबार लक्ष्मी र शुक्र ग्रहको पूजा गरे मिल्छ यस्तो लाभ ! जानी राखौ
साताको अन्तिम दिन अर्थाथ शुक्रबारलाई काम सुरु गर्दा राम्रो बारका रुपमा हेरिन्छ । धर्मशास्त्र अनुसार शुक्र ग्रह भोग९विलास, सांसारिक सुख, प्रेम, मनोरंजन, व्यवसाय, श्रीमतीको कारक ग्रह हो । त्यसैले आफ्नो श्रीमतीलाई कष्ट दिनु, कुनैपनि प्रकारको फोहोर वस्त्र लगाउनुले शुभ९अशुभ फल दिने गर्छ । शुक्रवारको दिन यी कामहरु गर्नुहोस् राम्रो मानिन्छ
जडिबुटीमा ट्रकको ठक्करबाट पैदलयात्रुको मृत्यु…..(भिडियो सहित)
कोटेश्वरको जडिबुटीमा ट्रकको ठक्करबाट पैदल यात्रुको मृत्यु भएको छ। ठक्करबाट सिन्धुपाल्चोक इन्द्रवती गाउँपालिका-३का ४४ वर्षीय धनबहादुर कार्कीको मृत्यु भएको महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका एसपी बामदेव गौतमले जानकारी दिए। कोटेश्वरबाट भक्तपुर जाँदै गरेको ना ६ ख २९१७ नम्बरको ट्रकले बिहीबार दिउँसो १ बजे कार्कीलाई ठक्कर दिएको हो। ठक्करबाट घाइते भएका कार्कीको उपचारका
२ सन्तान जन्माउनेलाई पुरस्कार
रम्भा गाउँपालिकाले एक वा दुई सन्तान जन्माई परिवार नियोजन गर्नेलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने भएको छ । समाजमा दुई सन्तान जन्माउने स्मार्ट दम्पतीलाई पाँच हजार प्रदान गरिने छ । एक वा दुई सन्तान जन्माई परिवार नियोजनका लागि प्रेरित गर्ने तथा जन्मदर न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सम्मान तथा पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष
दुखद खबर: काठमाडौंका ९४ वर्षका पुरुषको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु !
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण बुधबार काठमाडौंमा एक वृद्धको मृत्यु भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका असनका ९४ वर्षका वृद्धको मृत्युपछि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । उनको भदौ १ गते राति १० बजे मृत्यु भएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार ती पुरुष निमोनियाको बिरामी
भोलि देखि काठमाडौँ उपत्यका मध्यरातदेखि १ साता निषेधाज्ञा !
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा बुधबार मध्यरातिदेखि निषेधाज्ञा लगाइने भएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मंगलबार बसेको संयुक्त बैठकले भदौ ३ गते राति १२ बजेदेखि एक हप्तासम्म निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । यो अवधिमा औषधि, खाद्यबस्तु र अत्यावश्यकीय वस्तु खरिदको कामका लागि बाहेक बाहिर